10 febroary 2017: Adihevitra momba ny foto-kevitra: "« Ahoana ny fomba hanatsarana ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-bahoaka eto Madagasikara » - Transparency International - Initiative Madagascar
10 febroary 2017: Adihevitra momba ny foto-kevitra: "« Ahoana ny fomba hanatsarana ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-bahoaka eto Madagasikara »
Nivoaka ny 14 Febroary 2017 ao amin'ny Hetsika,
Ho fanatanterahana ny fandaharan’asa « Fangarahararanan’ny volam-bahoaka », Transparency International-Initiative Madagascar (TI-IM) dia nanasa ny vahoaka malagasy ny zoma 10 febroary 2017 hiatrika ny adihevitra mikasika ny lohahevitra « Ahoana ny fomba hanatsarana ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-bahoaka eto Madagasikara », izy io dia natao tao amin’ny Grand Amphi DEGS Oniversite Antananarivo.
Atoa FANOHIZA Claude, Tale mpananteraka ny TI-IM, Atoa RAKOTO David Doyen de la Faculté DEGS sy Ramatoa RADERT Hony, Coordinatrice du Collectif des Citoyens et Organisations Citoyennes (CCOC) no nandaha-teny nandritra io adihevitra momba io fampiasana ny volam-bahoaka io.
Olona miisa 100 eo no eo no namaly ny antso, ao anatin’izany ny mpianatra sy ny mpampianatra, ny solotenan’ny fiarahamonim-pirenena sy ny andrim-panjakana ary koa ny mpanao gazety.
Nafana ny adihevitra, ary efa ho ny atsasaky ny mpanatrika no naniry handray fitenena. Io adihevitra io dia niompana manokana tamin’ny tamberin'andraikitra sy ny fangaraharahana eo amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka. Nandritra ny famelabelarana nataon’I Ramatoa Radert dia nanambara izy hoe “Satria mandoha hetra aho, dia manan-jo hitaky asa tsara avy amin'ny fanjakana”
Ireto misy sombiny tamin'ny fanamarihana sy hevitra ary fanontaniana avy amin'ny mandray anjara:
“Mila fiarahamiasan’ny olom-pirenena rehetra ny fitantanana ny volam-bahoaka, izany hoe, ny olom-pirenena tsirairay dia tokony hanana fahafahana hijery ny tetibolam-panjakana, avy aiza ny vola? Tamin'inona avy no nampiasana azy? tetikasa inona avy no nandaniana azy?"
“Ety @ Oniversite Antananarivo ve misy fikambanana manokana izay mikarakara ny vatsim-pianarana tsy voarain’ireo mpianatra?”
“Eo anivon’ny conseil supérieur de contrôle Inspection Générale de l’Etat (IGE) sy ny fitsarana, ny fanehoan-kevitra dia voasakana eo anivon’ny fitsarana, tsy mahagaga raha tsy ahitana tsy fahatomombanana tonga eny amin'ny conseil de discipline."
Ireo mpandaha-teny dia niezaka nanome valiny ny akamaroan’ny fanontanian’ireo mpanatrika. Claude FANOHIZA, Tale Mpanatanteraka ny TI-IM dia nanamafy ny mahazava-dehibe ny fandraisana anjaran’ ny olom-pirenena Malagasy eo amin'ny fanaraha-maso ny fampiasana ny volam-bahoaka. "Zo antsika ny manaramaso io volam-bahoaka io satria, tsy azo adinoina fa ny hetra izay aloantsika no ahafahan’ny fanjakana mivelona”
Ny tanjon’io ady hevitra io dia fampahatsiahivana ny olom-pirenena ny lanjan’io fanaraha-maso io. Izany hoe, rehefa miditra ao anatin’io fanarahamaso ny fandaniana ataon’ny fanjakana sy ny fangatahina tamberin'andraikitra io ny olom-pirenena tsirairay dia manatanteraka ny zony izy. Izany dia mahatonga fangaraharana eo amin’ny fampiasana ny volam-bahoaka ary mampihena ny kolikoly izay mianjady eto Madagasikara.
Ato ato, Transparency International-Initiative Madagascar dia mbola hikarakara adihevitra bebe kokoa iarahana amin'ny vahoaka, izay atao eny amin’ny toerana akalamanjana, eny amin’ny haino aman-jery, ary mbola mikasika io fotokevitra io ihany.